Ihe omimi nke uwa na ihe omuma ndi ozo
Ihe a na-atụghị anya ya - ihe ebube na ihe omimi nke ụwa nke oge a
Ndị mmadụ enweela mmasị n'ọtụtụ dị iche iche, ihe omimi na ihe dị iche iche. Ọ bụ maka nkà mmụta uche ụmụ mmadụ, na-akọwa njedebe nke agụụ maka ihe niile zoro ezo na nke ọhụrụ. O siri ike ikwu na ihe ndị a na-atụghị anya ya na Earth bụ ihe omimi, ndị ọkà mmụta sayensị na-agbasi mbọ ike ịghọta ihe kpatara ihe ndị dị ugbu a.
Ihe ngosi na-enweghị atụ na oké osimiri
Ogbu mmiri na-adọta ndị mmadụ mgbe nile ma ọ bụghị ihe karịrị pasent 10 ka a na-amụ oké osimiri nke ụwa, ya mere ọtụtụ ihe atụ dị iche iche ka na-enweghị nkọwa, ndị mmadụ na-ejikọta ha na ihe ngosi dị iche iche. A na-edozi ihe omimi di omimi n'osimiri, ya mere, enwere mmiri, ebili mmiri, oke okirikiri. Ọ gaghị ekwe omume ịghara ịkọwa mpaghara ndị na- adịghị mma , nke a na-akpọ triangles, ebe ndị mmadụ, ụgbọ mmiri na ọbụna ụgbọ elu na-apụ n'anya n'enweghị nsụgharị.
Na Osimiri Norwegian n'akụkụ Osimiri Gulf Westfjord, nnukwu ụgbọ mmiri na-egosi ugboro abụọ n'ụbọchị, ma ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-atụ egwu ya, ebe ọ bụ na ọ na-ekwu na ndụ ọtụtụ mmadụ. A kọwara ọtụtụ ihe ndị dị egwu a na-apụghị ịkọwa akọwa na akwụkwọ ndị ahụ na banyere ikuku mmiri nke Malstrom e dere ọrụ "Ndapụ na Malstrem." Eziokwu ahụ bụ na otu narị ụbọchị a na-ahụgharị ụgbọ mmiri na-agbanwe. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na ihe ize ndụ nke Malstrom na akụkọ banyere ndị mmadụ na-ekwubiga okwu ókè.
N'etiti ebe omimi a ma ama abughi ebe ikpeazu bu Michigan Triangle, nke di na North America n'Ugwu Michigan. O doro anya na oké ifufe na oké ifufe nwere ike ime mgbe ọ bụla na nnukwu ọdọ mmiri, ma ọbụna ndị ọkà mmụta sayensị apụghị ịkọwa ụfọdụ n'ime nhụsianya:
N'ịkọwapụta ihe ndị na-enweghị atụ, ọ bara uru ikwu banyere ọdịiche dị omimi nke Flight 2501. N'afọ 1950 na June 23, ụgbọelu nke si New York kwụsịrị pụọ na windo radar. Achịghị eriri nke onye na-ekpuchi ya na ala ma ọ bụ n'elu mmiri. Ọ dịghị onye nwere ike ikpebi ihe kpatara ihe mberede ahụ, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ndị njem ahụ anwụghị.
Ihe omimi ọzọ, nke apughi ighota, mere na 1938. Captain George Donner gara n'ụlọ ya iji zuru ike ma pụọ. Ihe merenụ, na ebe nwoke ahụ gara, enweghị ike iguzosi ike.
Oke na-egbuke egbuke n'ime oké osimiri
N'elu mmiri dị iche iche, kwa oge n'elu mmiri ahụ na-egosi nnukwu okpuru na nke dị mma, nke a na-akpọ "wiil ndị Buddha" na "carousels diabolical." Dị ka akụkọ si kwuo, maka oge mbụ, a hụrụ ihe ndị dị otú ahụ na-enweghị atụ na 1879. Ndị ọkà mmụta sayensị na-etinye ọtụtụ nkwupụta, ma ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta ihe kpatara ya. Echere na enwere okirikiri site n'usoro nkuku mmiri nke na-esi n'ala ala. E nwere nsụgharị na nke a bụ ngosipụta nke mmepe mmiri na UFO.
Ihe omuma ihe omuma nke a na-achoghi edeputa
Ọ bụ ezie na sayensị na-agbanwe mgbe niile ọtụtụ ihe ndị na-emere onwe ha ka na-akọwabeghị ya. Ọtụtụ ihe dị iche iche na-anọgide na-eju ndị mmadụ anya, dịka ọmụmaatụ, ebe a, ị nwere ike ịkọwa na ntiwapụ dị iche iche dị na mbara igwe, mgbagharị na-enweghị atụ nke nkume, eserese n'ala na ihe ndị ọzọ. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ebute ọtụtụ echiche, karịa ụdị nke ọdịdị na ọdịdị ndị ọzọ a na-apụghị ịkọwa akọwa nwere ike ịkpasu iwe, mana ha ka na-enwe nsụgharị.
Kwa afọ na October, nke dị n'ebe ugwu nke Thailand, n'elu elu Osimiri Mekong, ụlọ ọkụ na-apụta, mita 1 n'obosara. Ha na-efe efe na ikuku mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Ndị na-ahụ ihe a na-ekwu na ọnụ ọgụgụ ndị dị otú ahụ bọọlụ ruru 800 ma n'oge ụgbọ elu ha na-agbanwe agba. Ihe omuma di omimi nke ndi okike nekwu n'uzo di iche iche:
Ndi Buddhist obodo na-ekwu na Naga (nnukwu agwọ asaa nwere isi asaa) na-enye ọkụ na-asọpụrụ nsọpụrụ ya nye Buddha.
Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na nke a abụghị ihe omimi dị omimi, kama ọ bụ ihe ndị dị na methane na nitrogen, nke a na-emepụta na ntutu. Mmiri nke dị na ala nke osimiri ahụ na-efe efe, na ụdị mpempe akwụkwọ, nke na-ebili elu, na-agbanye ọkụ. Ihe mere ọ na - eme naanị otu ugboro n'afọ, ndị ọkà mmụta sayensị apụghị ịkọwa.
Mkpụrụ ọkụ Hessdalen
Na Holland na-esote Trondheim nke dị na ndagwurugwu nke ndagwurugwu ahụ nwere ike ịhụ ihe a na-atụghị anya ya ka ọ dị ugbu a - ọkụ na-egbuke egbuke nke na-ebili n'ebe dị iche iche. N'oge oyi, ọnyá ndị ahụ na-enwu gbaa ma na-emewanyewanye ugboro. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu nke a na eziokwu ahụ bụ na ikuku dị n'oge a. Ịmụ ihe atụ na-enweghị nghọta, o doro anya na ụdị ọdịdị ọkụ nwere ike ịdị iche na ọsọ nke njem ha dị iche.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nnyocha dị ukwuu, na - ejighi ya anya - ọkụ na - eme dị iche iche, n'ihi ya mgbe ụfọdụ, nchịkọta nhazi enweghị ihe ọ bụla, ma e nwere okwu mgbe a na - agbanye ụda redio ugboro abụọ. Iji chọpụta ụdị ọdịdị na-enweghị atụ na ụdị ọdịdị ha nwere, e guzobere ọdụ pụrụ iche, nke na-emekarị nha. Na otu n'ime akwụkwọ akụkọ sayensị ahụ, echiche ahụ dị elu nke na ndagwurugwu bụ ihe mgbakwunye anụ ahụ. Emere nkwubi okwu a dabere n'eziokwu ahụ bụ na ókèala ahụ na-etinye nnukwu kemịkal nke kemịkal.
Ndị bi na London anaghị enwe ike ịgagharị n'obodo ahụ mgbe ọ na-ekpuchi okirikiri ojii. Edere ndị ọkà mmụta sayensị dị otú ahụ na-enweghị atụ na 1873 na 1880. A maara na na oge ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ anwụ ọtụtụ ugboro. Na nke mbụ, ọnụ ọgụgụ ahụ ruru pasent 40, na 1880, a hụrụ nnukpọ ndị dị ize ndụ nke sulfur dioxide gas n'ọgba mmiri ahụ, bụ nke kwuru na mmadụ 12,000 dị ndụ. Oge ikpeazu e dere ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa na 1952. Ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta kpọmkwem ihe kpatara ya.
Ihe omimi di omimi na ohere
Eluigwe buru ibu ma nwoke ahụ na-amụta ya site n'apịtị na n'ókè. Nke a na-akọwa n'ụzọ zuru oke na ihe omume ndị kasị dị egwu na-eme na mbara igwe, ọtụtụ n'ime ụmụ mmadụ ka na-amaghị. Ụfọdụ ihe atụ dị iche iche na-akọwa ọtụtụ iwu gbasara physics na sayensị ndị ọzọ. Site na iji teknụzụ ọhụrụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-achọ nkwenye ma ọ bụ ịchọta ụfọdụ ihe atụ.
Afọ iri gara aga, e debere satịlaịtị n'elu orbit nke ụwa, bụ nke a na-akpọ "Black Knight", n'ihi na ya na ndị ọzọ. Ọ bụ onye na-enyocha mbara igwe na-enyocha kpakpando na mbụ n'afọ 1958, ọ pụtaghị na radar ukara maka ogologo oge. Ndị ọkachamara na ndị agha United States na-ekwu na nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ihe kpuchiri ihe ahụ na akwa graphite, na-adọrọ mmasị na ebili mmiri redio. A na-ele ihe omimi dị otú ahụ anya dị ka ihe ngosi nke UFO.
Ka oge na-aga, ekele maka ihe ndị na-achọpụta ngwa ngwa, a chọpụtara satellite ahụ, na 1998, ụgbọelu na-ese onyinyo weere foto "Black Knight". E nwere ihe ọmụma, ọ na-agbanye ihe dị ka puku mmadụ 13. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị mgbe ha nyochachara nlezianya kwubiri na ọ dịghị satellite ma nke a bụ obere nkenke nke isi mmalite. N'ihi ya, a kwụsịrị akụkọ ahụ.
Ihe mgbaàmà ụwa "WOW"
Na Delaware n'afọ 1977, n'August 15, e mere ka ihe mgbaàmà dị na mbipụta nke telescope redio, nke mere 37 sekọnd. N'ihi ya, a nwetara okwu ahụ bụ "WOW", nke bụ ihe kpatara nke a, ọ gaghị ekwe omume ikpebi. Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na mkpali ahụ sitere na ìgwè ndị na-agbanwe agbanwe bụ Sagittarius na ugboro 1420 MHz, na, dika a maara, ọgbụgba nkwekọrịta mba a machibidoro ebe a. Achọpụtawo ihe ndị dị ịtụnanya na afọ ndị a nile, onye na-enyocha mbara igwe bụ Antonio Paris kwukwara na isi iyi ndị dị otú ahụ bụ ikuku mmiri na-acha gburugburu igwe.
Ndị ọkà mmụta sayensị kwuru okwu na-akpali akpali - chọtara ụwa iri nke mbara igwe. Ọtụtụ ihe dị ịtụnanya na mbara igwe mgbe ogologo oge nyocha na-eduga ná nchọpụta, ya mere ndị ọkà mmụta sayensị jisiri ike chọpụta na n'èzí nke Kuiper Belt nwere nnukwu mbara igwe nke dị okpukpu 10 karịa Earth.
Ụwa ohuru na-aga n'ebe obibi nke anụ ọhịa, na-eme mgbanwe nke gbara anyanwụ gburugburu puku afọ iri na ise.
N'ime ya, ọ yiri ndị dị otú ahụ dị ka Uranus na Neptune. A kwenyere na iji mezuo nchọpụta na nkwenye ikpeazụ nke ịdị adị nke iri, ọ ga-ewe ihe dị ka afọ ise.
Ihe ngosi na-enweghị atụ na ndụ mmadụ
Ọtụtụ ndị nwere ike ikwu na obi siri ha ike na ha echewo echiche dị iche iche na ndụ ha, dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ na-ahụ onyinyo ndị ọzọ, nke abụọ - nụrụ nrịgo ndị ahụ, ma ndị ọzọ - gaa ụwa ndị ọzọ. Ihe omumu ihe omuma a na-achoghi adighi nma nye ndi oka sayensi, kamakwa ndi ozo nke na ekwu na nke a bu ihe ngosi nke ndi bi n'uwa.
Mmiri nke Kremlin
A kwenyere na n'ime ụlọ ndị ochie, mkpụrụ obi nke ndị nwụrụ anwụ na-ebi ndụ n'oge a na ndụ ha. Moscow Kremlin bụ ụlọ elu nke nwere akụkọ ihe ike na ọbara ọbara. Mwakpo dị iche iche, mwakpo ọkụ, ọkụ, ihe a nile hapụrụ akara ya na nhazi ahụ ma echefula na otu n'ime ụlọ elu ahụ nọ na-ata ahụhụ. Ndị mmadụ nọ na Kremlin na-ekwu na ihe ndị dị ebube karịrị ihe ọhụrụ.
Ndị na-ehicha ọcha maara na eziokwu na ụda ndị ọzọ na-anụ na ọkwa efu. Ọnọdụ mgbe ihe na-ada site n'aka onwe ha, a na-ewere ya dịka iwu.
N'ịkọwapụta ihe ngosi a na-enweghị atụ nke Kremlin, ọ bara uru ikwu banyere mbelata kasị mma nke Ivan the Terrible. Ọtụtụ mgbe, ọ na-agba ọsọ na ala nke atọ nke Ivan Great Tower. A kwenyere na mmụọ nke eze ahụ na-adọ aka ná ntị banyere ọdachi ụfọdụ.
Enwere ihe àmà na n'ime oge Kremlin ị pụrụ ịhụ Vladimir Lenin.
N'abalị na Katidral a na-eche na ị ga-anụ nwatakịrị na-ebe ákwá. A kwenyere na ndị a bụ mkpụrụ obi nke ụmụaka a chụụrụ chi ndị ọgọ mmụọ àjà n'ụlọ nsọ, nke na-adị na mpaghara a.
Black Bird nke Chernobyl
Ọdachi dị na Chernobyl nuklia ike osisi a maara n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ruo ogologo oge, a na-ezobe ozi metụtara ya, ma mgbe nke ahụ gasịrị, e nwere ihe àmà gosiri na ọhụụ dị ịtụnanya na nke a na-enweghị atụ mere tupu ihe omume a. Dịka ọmụmaatụ, enwere ihe ọmụma na ndị ọrụ anọ nwere ọrụ gwara anyị na ụbọchị ole na ole tupu ihe mberede ahụ ha hụrụ otu ọhụụ nke nwere ahụ mmadụ na nnukwu nku na-efegharị n'elu ya. Ọ bụ ọchịchịrị na-acha uhie uhie anya.
Ndị ọrụ na-ekwu na mgbe nzukọ a nwesịrị, ha natara oku na egwu, na n'abalị, ha hụrụ nrọ egwu na egwu. Mgbe ntiwapụ ahụ mere, ndị mmadụ nwere ike ịlanarị ọdachi ahụ na-ekwu na ha hụrụ otú nnukwu nnụnụ si apụta si na anwụrụ. A na-elekarị ụdị ọhụụ ndị a na-enweghị atụ n'elu ụwa anya dị ka nhụsianya na ọhụụ na-emekpa ahụ.
Nsogbu nke ọnwụ
Ebumnuche ndị na-eme na ndị mmadụ tupu ha anwụọ maọbụ mgbe a na -akpọ ọnwụ ọnwụ na nso nso. Ọtụtụ ndị kweere na mmetụta ndị dị otú ahụ na-enye mmadụ ịghọta na mgbe ndụ ụwa gasịrị, nlọghachi ndị ọzọ na-echere mkpụrụ obi. Esemokwu dị iche iche na-ejikọta ọnwụ ọnwụ na-adọrọ mmasị ọ bụghị nanị ndị nkịtị, kamakwa ndị ọkà mmụta sayensị. Ihe kachasị emetụ n'ahụ gụnyere ihe ndị a:
Otu oghere nke ìhè ya na-ahụ anya;
nghọta nke ọnwụ nke onye;
eche na ohere agbanweela;
udo na udo;
izute ndị mmadụ nwụrụ anwụ;
enwe mmetụta na mkpụrụ obi esiwo n'anụ ahụ pụta;
egwu na ọchịchọ ịlaghachi n'ahụ gị.
Ihe omuma di otua nke di n 'uwa maka ndi sayensi abugh ihe omuma. A kwenyere na mgbe obi kwụsịrị, mgbe ahụ, hypoxia na-abịa, ya bụ, enweghị oxygen. N'oge ndị dị otú ahụ, mmadụ nwere ike ịhụ mmemme ndị a kapịrị ọnụ . Ndị nabatara na-amalite imeghachi omume n'ụzọ siri ike na ihe ọ bụla mepụtara na ìhè ọkụ nwere ike ime n'ihu anya, nke ọtụtụ ndị weere dị ka "ìhè na njedebe nke ọwara". Ndị na-ekwu banyere ihe ndị na-ekwu okwu na nkwenkwe na-ekwenye na nhụta nke ahụmahụ ndị nwụrụ anwụ na-apụta na ndụ mgbe anwụ nwụsịrị, a ghaghịkwa ịghọta nke a.
Ndịàmà Jehova - ndị bụ ha na gịnị mere e ji machibido ha iwu?
Chineke nke Gris oge ochie Zeus - ka Chineke yiri onye na-ekwu okwu olu, akụkọ banyere ọmụmụ Zeus
Ihe anwansi sephirotic
Snake Gorynych banyere isi atọ na akụkọ ifo Slavic
Kedu otu esi eme mascot?
Ahụhụ mgbe ọnwụ gasịrị
Adam na Iv - akụkọ nke nne na nna ochie
Kedu otu esi achọpụta ụbọchị ịtụrụ ime?
Mmanụ maka ihu - nke kachasị mma na ihe ịchọ mma
Mmekọahụ mgbe a na-ete ime
Mwepụ nke papillomas n'ụlọ
Ngosiputa Ngwa maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Gịnị mere ugoloọma ji rọrọ nrọ?
Mgbochi na windo abụọ
Kedu ka esi esi kụziere nwatakịrị ka ọ gbanwee site na afo na azụ?
Uwe ejiji - ihe kachasị ejiji na ihe ha ga-eyi?
Ahịrịokwu iri na itoolu nke a na-ekwesịghị ịgwa nwunye nwanyị dị ime
Nke ahụ bụ otú ọkara nke abụọ nke ndị nkiri si "Game nke ocheeze" lee!
Kedu ihe ị ga-esi na Kiev?
Azu egwu ụmụ nwanyị na ajị anụ
Ihe onyinye kachasị iche
Ọtụtụ ọnwa mgbe amuchara nwa
Kedu otu esi họrọ igwe?
Heiress Paul Walker ga-akpọ Porsche
Narcisso Rodriguez bụ ihe na-esi ísì ụtọ
Ụbọchị kachasị ize ndụ nke afọ ime
Victoria Beckham gosipụtara nkà ya na-abaghị uru